स्वास्थ्यका लागि बहुगुणी ‘अकबरे खुर्सानी’
स्वास्थ्य स्वास्थ्यका लागि बहुगुणी ‘अकबरे खुर्सानी’
Nepal Online Patrika: नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराउने खाद्यवस्तुमध्ये ‘अकबरे खुर्सानी’लाई पनि प्रमुख मानिन्छ । अकबरे खुर्सानी संसारमा कहीँ पनि नपाइने, कतै–कतै पाइए पनि नेपाल जस्तो पिरो र स्वादिलो पाइन्न ।
अकबरे खुर्सानीलाई डल्ले र ज्यानमारा भनेर पनि चिनिन्छ । आवश्यकताभन्दा ज्यादा खाँदा ज्यान समेत जाने हुनाले पहाडतिर यसलाई ‘ज्यानमारा’ भनेर चिनिएको हो ।
खुर्सानी साधारणतया पिरो स्वाद दिने फल हो । खुर्सानीको पिरो तत्वलाई ‘क्याप्सिसिन’ र त्यो वनस्पतिलाई ‘क्याप्सिकम’ भनिन्छ । यसलाई अकबरे भनेर पनि चिनिन्छ । अरु खुर्सानीको तुलनामा यो अझ पिरो र स्वादिलो हुन्छ ।
डल्ले खुर्सानीलाई विदेशीले पनि निकै चाख दिएर खान्छन् । यसले खानालाई पिरो मात्र बनाउने होइन, एक किसिमको छुट्टै खालको स्वाद दिने हुँदा खानाको स्वादमा नै भिन्न मिठास ल्याइदिन्छ । यो खुर्सानीले खानालाई स्वादिलो मात्र बनाउने होइन, स्वाथ्य सम्बन्धी पनि फाइदा छ । नेपाली समाजमा यो खुर्सानीलाई ग्यास्टिकको दबाइ भनेर नै चिनिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा विदेशिएका नेपालीले सबैभन्दा ‘मिस’ गर्ने चिज नै यो डल्ले खुर्सानी हो भनिन्छ । त्यसैले त जोकोही आफन्त नेपालबाट जाँदा उनीहरूले यही अकबरे मगाएका हुन्छन् ।
नेपालका प्रायः सबै भूभागमा अकबरे खुर्सानीको खेती हुने भए पनि अकबरे खुर्सानी नेपालको पहाडी जिल्लामा राम्रो उत्पादन हुन्छ । नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लामा यसको उत्पादन धेरै हुने गर्छ ।
तेह्रथुमबाट २०७५ सालमा मात्र ६ करोडको डल्ले खुर्सानी निर्यात गरिएको थियो । भारतका विभिन्न स्थानमा निर्यात गरिने डल्ले खुर्सानी बहुप्रायोजनका लागि हुनाले बजार सहज पाइन्छ । प्रतिकिलो ३०० देखि ४५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने हुँदा किसानहरू पनि यो नगदे बालीमा आकर्षित भएका छन् ।
खुर्सानीको वैज्ञानीक नाम ‘क्याप्सिकम फ्रुटेसेन्स’ हो भने यसलाई अंग्रेजीमा रेड सभिना पेपर हवानो पेपर भनेर चिनिन्छ । प्रायः भेडेखुर्सानीबाहेक सबै खुर्सानी पिरो नै हुन्छ । कुनै ज्यादा पिरो हुन्छ त कुनै कम पिरो तर लामो खालको माछा खुर्सानी पनि खासै पिरो हुन्न । खुर्सानी खानु पेटका केही बिमारीका लागि बेफाइदा भए पनि यसका फाइदा धेरै छन् ।
सामान्यतया नेपाली भन्सामा खुर्सानी व्यापक प्रयोग हुन्छ र योभित्र पनि दर्जनौं जात हुन्छन् । यो समय नेपालमा पनि डल्ले खुर्सानीको सिजन भएका कारण जहाँतहीँ यही खुर्सानी देख्न सकिन्छ । यो खुर्सानी काँचो (हरियो), पाकेको, सुकेको र अचार हालेको जुन हिसाबले पनि खान सकिन्छ । यो खुर्सानी सलादमा मिसाएर खान सकिन्छ । ‘स्पाइसी ड्रिंक’ भनेर ‘हार्ड ड्रिंक’मा समेत मिसाएर खान थालिएको छ ।
अन्य खुर्सानीको तुलनामा यो खुर्सानीमा अलि भिन्न स्वाद हुने हुँदा जसरी खादा पनि उत्तम मानिन्छ । जिब्रोलाई पिरो लागे पनि अन्य खुर्सानीले जस्तो यो खुर्सानीले पेटमा कुनै असर गर्दैन । नेपालबाट अकबरे खुर्सानीको अचारजन्य परिकार बनाएर अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न मुलुक, अस्ट्रेलिया र मलेसिया लगायतका देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । साथै यो खुर्सानी ग्यास्ट्रिक तथा चिसो लागेका मानिसको लागि औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ ।
अकबरे खुर्सानी नियमित सेवन गर्दा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदाहरू:
1.खाना पचाउने काममा विशेष सहयोग पुर्‍याउने काममा अकबरे खुर्सानीले सहायता पुर्‍याएको हुन्छ ।
2. माइग्रेनको समस्या समाधानका लागि पनि यो खुर्सानी अति उत्तम मानिन्छ ।
3.नियमित यो खुर्सानी सेवन गर्नाले केही हदसम्म क्यान्सर लाग्नबाट जोगिन सकिन्छ ।
4.कोल्ड फ्लुबाट बचाउन पनि धेरै हदसम्म मद्दत पुर्‍याउँछ ।
5.हाडजोर्नीमा हुने दुःखाइ कम गराउन पनि यो खुर्सानी नियमित खान सकिन्छ ।
6.कार्डियोभास्कुलर र हार्टको समस्या हुनबाट जोगाउन पनि अकबरे निकै फाइदाजनक साबित छ ।
7.डायबिटिज हुनबाट जोगाउन विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ ।
8.शरीरमा रेड ब्लड सेल बढाउन विशेष मद्दत पुर्‍याउँछ ।
9.रगतमा चिनीको मात्रा घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र सुगर रोगबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।
10.ग्यास्टिक तथा अल्सर रोग निदान हुन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
11.पिसाब सम्बन्धी समस्या कम गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
12.अकबरे हालेर पकाएको खाना किटाणुरहित हुने हुँदा कुनै पनि तरकारीमा थोरै भए पनि यो खुर्सानी हाल्नु राम्रो मानिन्छ ।
13.थकान घटाएर शरीरमा चंगा बनाउन विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ तपाईंलाई अल्छी लागेका बेला अकबरे खुर्सानी र नुन पिनेर कुनै पनि चिजसँग खान सक्नुहुन्छ ।
14.यो खुर्सानीमा क्याप्सिसिन पाइन्छ । जसका कारण पेट सम्बन्धी मात्र होइन अन्य रोगी निको पार्न समेत फाइदा पुर्‍याउँछ ।
ज्वानोको झोल खानुका यस्ता फाइदाहरु, तौल घटाउनु मन भए खानुहोस्:
हाम्रो भान्छामा प्रयोग हुने मसलाको रुपमा ज्वानोलाई लिने गर्दछौ । ज्वानोलाई मसला मात्रै हामी सोचेको हुन्छौ होला तर ज्वानो खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायी हुन्छ । यसलाई खाद्य विशेषज्ञले नेगेटिव कैलोरी फूड मा गणना गर्दछन । यो थोरै मात्रामा खादा पनि पेट भरिएको अनुभव गराउने हुनाले वजन घटाउन चाहनेहरु ले यसको झोल खाने गर्दछन ।
हेर्नुहोस् के–के छन् ज्वानोका फाइदा:
१. पेट दुखाईमा ज्वानो:
२. सर्दीमा ज्वानो:
३. दममा ज्वानो:
४. मधुमेहमा ज्वानो:
१ चियाचम्चा ज्वानोको दाना र ४ चियाचम्चा बेलपातको जुस दिनको दुईदेखि तीनचोटी खाँदा मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ ।
५. रक्सी छुटाउन:
६. हैजामा ज्वानो :
७. मृगौलामा हुने पत्थरीमा ज्वानो:
८. तौल घटाउनमा ज्वानो:
९. पेट फुल्ने रोग र वायुविकारमा ज्वानो: